Ihe mere 2016 ga - eji bụrụ akara aka zuru ụwa ọnụ maka akụ na ụba ekwentị | Martech Zone
Ndị ọkà mmụta sayensị nọ na Antarctica na-ebudata egwuregwu mkpanaka. Ndị nne na nna nọ na Syria na-echegbu onwe ha banyere ụmụaka na-eji teknụzụ dị ukwuu. Ndị Islanders na American Samoa jikọọ na 4G, na sherpas na Nepal na-akparịta ụka na ekwentị ha mgbe ha na-ebu ibu 75-paụnd.
Onodu aku na uba bu na-eru n'ókè zuru ụwa ọnụ.
Ndị ọrụ ekwentị mkpanaka zuru ụwa ọnụ, nwere data sitere na Ericsson na TUNE
Anyị na-anụ ọnụ ọgụgụ buru ibu mgbe niile. 800 nde ndị ọhụrụ na-edebanye aha ekwentị na smartphones nke afọ a, ụwa. 600 nde ọzọ na 2016. Tinye ya na ndị ọrụ ama ama dị ugbu a, ma a ga - enwe ndị otu klọb 6.5 site na 2020.
Ebe isi mmalite?
Na 2015 banyere 47% nke mbara ala nwere ama, dị ka Ihe data Ericsson. Na 2016, ọnụ ọgụgụ ahụ ga-afụ akara akara 50%, na-eru nso ihe ruru ijeri 4. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, na-eto ngwa ngwa karịa ọnụ ọgụgụ ụwa, nke dị ihe dịka ijeri 7.3 ugbu a.
TUNE na-ahụ nbudata azụmahịa m na ịzụ ahịa si India karịa mba ọ bụla, n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Kedu nke kpatara na mgbakwunye na ọtụtụ narị nde ndị ọrụ ama ama na US, 86% oge nke mkpanaka ejiri na ngwa na mba ndị mepere emepe, ndị ngwa ngwa nke m-commerce na United States na ole na ole gara aga, na oke ọrụ nke m-azụmahịa na mobile-ụwa mbụ nke India (gbakwunyere ruo n'ókè dị nta, China)… anyị na-ahụ oge dị mkpa na oke mkpanaka mgbanwe nke ndị mmepe na-arụ ọrụ n'ebe, marketers a na-anụ banyere, na ụdị a na-atụ anya.
Kedu ihe pụrụ iche n'okwu a?
As GameStop, ka ihe atụ, gwara m: gị na-eji ngwa-eji ahịa bara uru okpukpu abụọ gị kasị elu-uru-eguzosi ike n'ihe club ahịa. Na, akụ na ụba nke mbido na-enyere ụdị ohere ọhụụ niile aka. Anyị ahụla mbụ ngosipụta ya na ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke ewuru n’elu ngwa ngwa mkpanaka dịka Uber, AirBnB, Amazon, were gabazie. Osimiri ọzọ bụ Sephoras, Sonys, Staples, na nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ebu ụzọ azụlite ahịa na otu na mmekọrịta ndị ahịa na eso ụzọ ha, ndị ọrụ ha, agbụrụ ha, ma ọ bụ ndị ahịa ha. ihe azụmahịa ha pụtara ọbụna na akụ na ụba mkpanaka-nke mbụ.
Egwuregwu dị ukwuu. Mana anyị na-ahụ akụ na ụba mkpanaka na ịzụ ahịa, njem, ndụ, na ngwa mmekọrịta.
Ntinye Drone? Ma eleghị anya, ọ bụghị ozugbo.
Mana Uber nyere aka na ntinye akwụkwọ nke ọfịs sitere na Staples nke nwere ike bie obere elekere ole na ole na ebe nkesa Amazon jisiri ike? Ihe dị ka nke a abụghị nke ga-eme n'ọdịnihu.
Ndị dike ahụ na-egwu egwuregwu mkpanaka dịka Supercell, Kabam, Mpaghara Ngwa, Electronic Arts, na King bụ ndị mbụ gosipụtara ụwa otu esi enweta ego na ekwentị. Mana $ 70-100 ijeri ụwa ga-eji zụta ihe n'ime ngwa n'ime afọ ole na ole oge ga - $ 500-550 ijeri ọ ga-efu na ngwaahịa na ọrụ ndị na-abụghị nke mebere site na ngwaọrụ mkpanaka mana ewepụtara ya, na ọkwa ụfọdụ, na ụwa n'ezie.
Na n'eziokwu ahụ, ịbụ onye na-agagharị agagharị agaghị abụ ihe na-eme nke ọma. Ọ ga-abụ maka ịlanarị.
Ederede a dabere na akụkọ site na akụ.
Budata Akụkọ zuru ezu Ebe a!
Tags: ụdịegwuregwum-azụmahịamobile ngwa ọdịnalaonodu aku na ubamobile iziziahịa efusmartphone-akụ